बीपीका उपकुलपतीलाई कोरोना पुष्टि - Mero Mechinagar
बीपीका उपकुलपतीलाई कोरोना पुष्टि
धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपती डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । सोमबार गरिएको पीसीआर रिपोर्टमा गिरीलाई कोरोना पुष्टि भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिए।
कोरोना पुष्टि भएपछि डा. गिरी कोभिड अस्पताल भर्ना नभइ प्रतिष्ठानको आफ्नै निवासको आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनले प्रतिष्ठानको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत आफू कोरोना संक्रमित भएको र निवासमा आइसोलेसन वार्डमा बसेको जानकारी गराएका छन्।
गिरीले आफूसँग सम्पर्कमा रहेका सबैलाई पीसीआर चेक गर्न र सजगता अपनाउन अनुरोध गरेका छन् । डा. गिरी यहि भदौ २३ गते काठमाडौंमा केही दिन बसेर फर्किएका थिए । उनले प्रतिष्ठानको नियमित काम गर्ने क्रममा नै आफू संक्रमित हुन पुगेको बताएका छन् ।
हप्तादिनको बीचमा संक्रमित डा. गिरीसँग प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारी, दर्जनौं चिकित्सक, धरानका जनप्रतिनिधि, पत्रकारलगायतको भेटघाट भएको बुझिएको छ ।